इनेप्लिज २०७३ पुष २७ गते ०:०५ मा प्रकाशित
वासिङ्टन डीसी, २६ पुष। अमेरिकामा उदियमान कम्पनीका रुपमा सुरु भएको सामाजिक कमर्स सगुन (www.sagoon.com)ले अमेरिकी सेक्युरिटिज् तथा एक्सचेन्ज कमिसन (एस्‌ईसी) मा रेगुलेशन ए प्लस व्यवस्था अन्तर्गत (मिनी आइपीओ) खुल्ला हुनु अगाडी रु ५० करोड भन्दा बढी लगानीको आशय प्राप्त गरेको छ। सगुनले मिनी आइपिओमा २ करोड डलर अर्थात २ अर्व भन्दा बढी लगानीको रुपमा जुटाउँने तयारी गरेको छ।
एस्‌ईसीबाट लगानी प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि कम्पनीले ८,६९,५६४ कित्ता ग श्रेणीको सामान्य शेयरलाई २३ डलर प्रति कित्तामा बेच्न सक्नेछ। यसमा लगानी गर्नको लागि न्युनतम १३ कित्ता शेयर खरिद गर्नुपर्नेछ जसको कुल मूल्य २९९ डलर हुन्छ। त्यसभन्दा बढी खरिद गर्न चाहनेले भने माग गरेजति प्राप्त गर्न सक्नेछन्। शेयर बिक्रीमा सहयोग गर्ने कम्पनीले अधिकतम् शेयरहरु बिक्री गर्न प्रयास गर्नेछ। विश्वभरका सर्वसाधारणले शेयर खरीद अनलाइबाट गर्न सक्नेछन्।
सगुनको वेबसाइट https://www.sagoon.com/invest? मा गएर सगुनको शेयर खरिद गर्न सक्नेछन्।
यस अवसरको बारेमा थप जानकारी पाउनको लागि https://www.sagoon.com/invest? गएर इच्छा अनुसारको आशय व्यक्त गर्न सकिनेछ। सगुन प्रारम्भिक चरणमा रहेको सामाजिक कमर्स प्लेटफर्म हो जसको उद्देश्य भनेको सामाजिकीकरण गर्दा पैसा कमाउन सक्ने अवसर प्रदान गर्नु हो। सगुन सन् २००९ मा सर्च इन्जिनको रुपमा सुरु भएको थियो तर पछि २०१४ मा सामाजिक कमर्श प्लेटफर्मको रुपमा विकास गरिएको छ।